Ụzọ dị mfe iji Nyefee Ndi ana-akpo ka iOS
> Resource> iOS> otú nyefee Ndi ana-akpo si gam akporo ka iOS
Na mmelite mma ma ewu ewu na nke Apple ngwaọrụ, ọzọ na ndị ọzọ ndị mmadụ na-ewekarị enweta otu ma ọ bụ abụọ Apple ngwaọrụ, dị ka iPhone, iPad na iPod. Ọ bụrụ na ị na-eme iji nweta otu, i nwere ike na-agba nyefee kọntaktị site na Android ka iOS. Otú ọ dị, edezi kọntaktị otu otu na gị iOS ngwaọrụ bụ ihe incredibly siri ike ọrụ, karịsịa mgbe i nwere otutu kọntaktị.
Ke idaha emi, ga-amasị m ike ikwu na ị na-ekwentị transfer ngwá ọrụ, Wondershare MobileTrans ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac, nke nwere ike nnọọ ime kọntaktị nyefe si Android ka iOS 9/8/7/6/5 mfe na rụọ ọrụ nke ọma.
Biko soro nzọụkwụ n'okpuru. Ha na-nnọọ mfe. Na-agụ ha na ị ga-amụta otú nyefee kọntaktị site na Android ka iOS.
Nzọụkwụ 1. Wụnye na ẹkedori Wondershare MobileTrans
Nke mbụ niile, wụnye MobileTrans na kọmputa gị. Ẹkedori ya na-egosi MobileTrans isi window.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị android ekwentị na Apple ngwaọrụ ka na kọmputa
Ọzọ, jikọọ ma gị Android ekwentị na Apple ngwaọrụ ka na kọmputa. Ozugbo ha jikọọ, MobileTrans ga chọpụta ha ozugbo o kwere omume.
Ke adianade do, ị nwere ike efu nke kọntaktsị na ebe ekwentị site na ịpị "Doro Anya data tupu oyiri".
Nzọụkwụ 3. Nyefee Android kọntaktị na iOS
Mgbe ahụ, mgbe ị gụsịa n'elu nzọụkwụ, wepụ akara tupu ederede ozi, music, foto na vidiyo. Mgbe ahụ, pịa "Malite Copy". N'ezie, cheta na-gị ntị ejikọrọ oge niile.
Ị mere nke ọma! The kọntaktị na-ugbu a na gị iPhone.
Tụrụ gị n'anya, windo version-enye ohere ka nyefee Symbian kọntaktị na Android / iOS kwa. E wezụga, n'adịghị edegharị data site ígwé ojii nke bụ mma na niile, ọ bụ kpam kpam n'ihe ize ndụ-free na ọ dịghị mgbe furu efu gị data n'oge nyefe.